Ciidamo ka wada tirsan Dowladda oo maanta ku dagaalamay Muqdisho – Hornafrik Media Network
kulanka Golaha shacabka ee Baarlamaanka oo buuq ku furmay.
Xog-Maxaa loo dilay Taliyihii Guusha Awdheegle?
Duqa Muqdisho oo ka hadlay casilaad uu sameeyo.
Taliyaha booliska Gaalkacyo oo ka warbiyay sida uu uga badbaaday Qarax loogu xiray…
Ciidamo ka wada tirsan Dowladda oo maanta ku dagaalamay Muqdisho
By HornAfrik	 On Apr 14, 2019
Muqdisho-Hornafrik-Iska Hor imaad u dhaxeeyay Ciidamo kawada Tirsan Dowladda Soomaaliya ayaa goordhaweyd waxa uu ka dhacay Isgoysyada Baar Ayaan iyo Towfiiq ee Magaaladda muqdisho.
Goobjoogayaal ayaa Warbaahinta u sheegay in ay arkayeen Ciidamo Malatariga Soomaaliya oo doonayay in ay xoog ku maraan bar kontorool oo Ciidamadda Booliska ay ku sugnaayeen waxaana halkaasi ka bilaawday is rasaasayn dhex martay labada Ciidan.
Inta la xaqiijiyay Sedax Askeri oo labada dhinac ah ayaa ku dhimatay iska hor imaadka ka dhacay Isgoysyada Baar Ayaan iyo Towfiiq ee Magaaladda muqdisho waxaana jira dhaawacyo soo kala gaaray oo aan tiradooda la cayimin.
Galinkii danbe ee Shalay ayay sidaani oo kale Ciidamo ka kala tirsan Militariga iyo Booliiska soomaaliya waxa ay ku dagaalameen Isgoyska Maanaboolka ee magaalada Muqdisho ayadoona uu halkaasi ku soo kala gaaray khasaare is kugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Banaanbaxyo looga soo horjeedo dilal loo gaystay dad shacab ah oo Muqdisho ka soconaya
Duqa Muqdisho iyo Taliyaha Booliska oo la kulmay ehelada Labo wiil oo Muqdisho lagu dilay